တရုတ် COLOR coated mesh စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | EXJIA
coated Flex ကိုနဖူးစည်းစာတန်း
လမိုင်း Flex ကိုနဖူးစည်းစာတန်း
တစ်ခုမှာ Way ကို Vision ၏
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Maginetic sheet
Pritnable PP စက္ကူ
လူမီနီယမ် Compostite Panel ကို
အားသာချက်: အင်္ကျီကွက်: အကောင်းဆုံးများထဲမှခြမ်း print ထုတ်လို့ရတဲ့, ကုတ်အင်္ကျီကွက်ကောင်းမှင်ခြောက်သွေ့မြန်နှုန်း။ ကှနျ့နှင့်အတူကွက် Banner coated PVC တစ်ဦးအလင်းအလေးချိန်ပေမယ်တင်းကျပ်စွာယက် scrim ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ပြောင်းပြန်ဘက်တစ် PVC ကှနျ့ပုံနှိပ်ပြီးနောက် detach လုပ်လိုက်သောခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ယင်း၏ဖွင့်လှစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအထူးအရည်ပျော်ပစ္စည်းမှင်ဂျက်မီဒီယာ, ပြင်ပကြော်ငြာမှကြီးစွာသောလေတိုက်စီးဆင်းမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့စူပါမားကတ် Feature ကိုအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါသည်: တည်ငြိမ်မှင်စုပ်ယူမှုနှင့်ပိုမြန်ခြောက်သွေ့စွမ်းရည်နှင့်အတူ 1. ပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်ခြင်းစှဲ။ 2. Differen ...
coated ကွက်: အကောင်းဆုံးများထဲမှခြမ်း print ထုတ်လို့ရတဲ့, ကုတ်အင်္ကျီကွက်ကောင်းမှင်ခြောက်သွေ့မြန်နှုန်း။
PVC coated meshကှနျ့နှင့်အတူနဖူးစည်းစာတန်းတစ်ခုအလင်းအလေးချိန်ပေမယ်တင်းကျပ်စွာယက် scrim ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ပြောင်းပြန်ဘက်တစ် PVC ကှနျ့ပုံနှိပ်ပြီးနောက် detach လုပ်လိုက်သောခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ယင်း၏ဖွင့်လှစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအထူးအရည်ပျော်ပစ္စည်းမှင်ဂျက်မီဒီယာ, ပြင်ပကြော်ငြာမှကြီးစွာသောလေတိုက်စီးဆင်းမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ကြီးမားသောစူပါမားကတ်များတွင်အသုံးပြုသည်
တည်ငြိမ်မှင်စုပ်ယူမှုနှင့်ပိုမြန်ခြောက်သွေ့စွမ်းရည်နှင့်အတူ 1. ပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်ခြင်းစှဲ။
ရရှိနိုင်ပါ 2. ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်
အမျိုးမျိုးသော solvent အခြေစိုက်ဒီဂျစ်တယ်ပရင်တာနှင့်အတူ Excel သဟဇာတ 4.
ညစ်ပတ်ပေရေနှင့်မြေမှုန့်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်နှင့်အတူ 5. လြယ္ကူအဝတ်လျှော်။
7. အမြင့်ဆန့ခွန်အားအစွမ်းသတ္တိကိုဖြတ်, Anti-ခရမ်းလွန်
1.02m ထံမှ 5.10m ဖို့နေကြပါတယ် 8.Width
9. ရာသီဥတု-ခုခံ B1, M2 လွန်ရနိုင်ပါသလား, 12 တန်းမုန်တိုင်းဆန့်ကျင်မီးနှောင့်နှေးခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
10. လွယ်ကူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း။
ထိုကဲ့သို့သော Billboard ပုံနှိပ်ခြင်း, ကျော်အရွယ်ပြင်ပ / မိုးလုံလေလုံကာစရာကုလားကာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, Front-lit နှင့် backlit နဖူးစည်းစာတမ်းတွေအဖြစ် 1. အကြီးစား format နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း,
ခြင်ထောင်, သားသမီးအဝတ်, ကုလားကာ Insight web studio ၏အောင်များအတွက်အသုံးပြု 3.
Non-ferrous သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြု 4.
5.Packing ပစ္စည်း, အ rainproof နှင့်နေကာ။
7. အဆောက်အအုံပန်းချီကားများနှင့် In-store ကို display တွေ, ကိစ္စ္စနှင့်ငြမ်းအဖုံး
ယခင်: print ထုတ်လို့ရတဲ့အင်္ကျီကွက်
နောက်တစ်ခု: အအေးလမိုင်း FRONTLIT
ဖှဲ့အထည်အလိပ်ခုနှစ်တွင် mesh coated
mesh coated PVC
PVC coated mesh Flex ကိုနဖူးစည်းစာတန်း
Backline coated ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ
print ထုတ်လို့ရတဲ့ coated ...
719 # Chengdian တောင်လမ်း, Yiwu စီးတီး, Zhejiang, တရုတ်
E-mail ကို: sales@ejflex.com
ဖက်စ်: 86 579 85317898
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Flex ကိုနဖူးစည်းစာတန်း Market က 2025 Incredible ...
27 ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာအေဒီ & SI ...
THE DPES ကွမ်ကျိုးနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြ 2019
DPES SIGN Expo တရုတ် 2019
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ လမ်းညွှန် - ထုတ်ကုန်များ Featured - မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Pvc Vinyl, အရည်အသွေး Flex ကိုနဖူးစည်းစာတန်း, လွှဲပြောင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင်ဗီနိုင်း , Wholesale Frontlit Banner Material, One-Way ကို Vision ၏ဗီနိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် , နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ပြန်ဟပ် sheet,